သင့်ကိုယ်သင် Swag အကောင့်တစ်ခုရယူပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2012 တနင်္လာနေ့မတ်လ 5, 2012 Douglas Karr
ကြှနျုပျတို့ခစျြ ခိုးရာပါပစ္စည်း။ ကျွန်တော်တို့၏ အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး swag အမိန့်ပေးခဲ့သည် ကွန်ဖရတက်ရောက်သူများအတွက်မှတ်စုစာအုပ်လေးပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ငါတို့အချို့ဝယ်ယူခဲ့သည် 2Gb USB drives တွေကိုအေးအောင်လုပ်ပါ ၎င်းသည်သော့၏ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားတူသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုသင်၏သော့ကွင်း၌ထည့်နိုင်သည်။ ငါတို့ရုံးကရပ်လိုက်ပြီဆိုလျှင်သင်ကလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
swag ဆိုတာဘာလဲ လုယက်ခြင်း၊ လုယူခြင်း၊ လုယူခြင်း၊ လုယူခြင်းများ။ ကုမ္ပဏီတွေဆီကနေသူတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိမ်ခန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်တာ၊ အွန်လိုင်းကူညီတာတို့၊ swag locker ရဲ့သော့တွေနဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းတို့အတွက်ရထားတဲ့ဘဏ္theာပဲ။ တစ်နေ့တာမှာကျွန်တော်ဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှထွက်သွားတာကိုအမှတ်ရမိသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
Swag သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အနည်းငယ် ပို၍ ပညာရှိပြီး၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်မှစီးပွားရေးသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။ ဒီတစ်ပတ်ငါမှာအသင်းနှင့်အများကြီးစကားပြောခဲ့ကြရတယ် WPEngine (တည်ထောင်သူ Jason Cohen ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ် guest ည့်သည်ဖြစ်ပါတယ် သောကြာနေ့) ဒါဆိုငါပေးခဲ့တဲ့အကြံပြုချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲအေးတိအေးစက်တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။ ငါ link တစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့သည် အချစ်ရယ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုရွေး။ ကျွန်ုပ်ထံတိုက်ရိုက်အပ်နှံရန်!
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရေကြောင်းပို့ခြင်း၊ အကောက်ခွန်နှင့်ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုဂရုစိုက်သည်။ မည်သည့်ကြို့ထိုးမှုများရှိပါက ('အိုး၊ ကျွန်ုပ်သည်မှားယွင်းသောအရွယ်အစားကိုမှာသည်') ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အဲဒါဘယ်လောက်အေးသလဲ သင်မကုန်ဆုံးနိုင်သောသို့မဟုတ်မပေးနိုင်သော Swag အကွက်တစ်ခုကိုဝယ်မည့်အစားသင်၏ SwagLove အကောင့်ကိုသင်ငွေရှင်းပြီးသင်သွားသကဲ့သို့ပေးချေနိုင်သည်။ ပြီးတော့သင့်ဖောက်သည်တွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ Swag ကိုရွေးပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းအေးတယ်!
Tags: ဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုဖောက်သည်ဆုခိုးရာပါပစ္စည်းswag အကောင့်မင်္ဂလာပါ
မတ်လ 5, 2012 မှာ 12: 51 pm တွင်
ကြွေးကြော်သံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတို့ဝန်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာပါတယ် ၎င်းသည်ရိုးရာမြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၏နည်းလမ်းများနှင့်လုံးဝမတူဘဲဝေးကွာသော်ငြားလည်း web ကုမ္ပဏီများက၎င်းကိုလက်ခံနေပုံရသည်။
ကျနော်တို့တော်တော်လေးဆန်းသစ်ကုန်သွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအချို့ကိုစတင်စတင်နေပြီ။ WPEngine ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအချို့သည်စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဖောက်သည်အသစ်များအားအခမဲ့ငွေများလွှဲပေးနေကြသည်။ အခြားသူများကဖောက်သည်ဝယ်ယူရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် swag ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “ မင်းကအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းကိုဒီလက်ဆောင်ကိုအခမဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိမ့်မယ်” တကယ့်ကိုဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့သူတွေကဒီထက်ပိုပြီးယူပြီးလူတွေကိုဆိုက်ထဲကို ၀ င်ပြီးစာရင်းပေးသွင်းဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့ retargeting စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသုံးနေကြတယ်။ ကောင်းကင်ကတကယ်ကန့်သတ်ချက်ပါပဲ ဒါကအစပဲရှိသေးတယ် နည်းပညာစျေးကွက်သမားတိုင်းသည်သူတို့၏စျေးကွက်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများ (swag) ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများရှိသည်။ အွန်လိုင်းစျေးကွက်များနှင့်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီအများစုသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားမည်သည့်အရာမျှအမှန်တကယ်ပေးပို့ခြင်းမရှိသောကြောင့် virtual company တစ်ခုမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုရရှိခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်တည်မြဲစှဲထွက်ခွာမည်။
သင်သို့မဟုတ်သင့်စာဖတ်သူများတွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအလိုရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။